niche အွန်လိုင်းယာဉ်အသွားအလာ - မကြာခဏမေးခွန်းများကိုမေးသော်
နောက်ဆုံးတော့သင့်ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးစေရန်ဝမ်းမြောက်! Niche Online Traffic သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို ၁၀၀% စစ်မှန်သောလူသား visitors ည့်သည်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာပေးသူဖြစ်သည် ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလူ့အသွားအလာကိုပို့ဆောင်ပေးပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတိုင်းကို ဦး စားပေးသေချာစေမည့်သူတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်ကွန်ယက်များနှင့်အတူလုပ်ကိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်နည်းပညာနှင့်ကြော်ငြာတွင်အကြီးမားဆုံးသောနာမည်များဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ် ဦး ချင်းအပါအဝင်ထိပ်တန်းအရည်အချင်းကိုခန့်ထားပါသည်။
သငျသညျယောက်ျားတွေ porn / လိင်ကစားစရာ / လောင်းကစားဝိုင်း / clickbank ကိုလက်ခံပါသလား
ကျနော်တို့လုံးဝလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသွားအလာပေးလျှက်ရှိသည်။
အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီများ, မိုဘိုင်း developer များနှင့် Affiliate စျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆောင်ဆည်းပူးခြင်းနှင့် paid အသွားအလာမှတစ်ဆင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရန် go ရှိရာအွန်လိုင်းကြော်ငြာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အတွေ့အကြုံ 16 နှစ်ပေါင်းနှင့်အတူ, niche အွန်လိုင်းယာဉ်အသွားအလာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီ၏နေ့စဉ်သန်း 100 ကျော်တွေ့ကြုံနှင့် 50 သန်းထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်များထုတ်လုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးအသွားအလာကွန်ရက်များထဲကတစ်ခုလည်ပတ်!
ကျနော်တို့ရုံအသွားအလာမကယ်မနှုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ပြောင်းလဲခြင်း၏အမြင့်ဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိသည်အသွားအလာကိုပစ်မှတ်ထား, နယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကယ်နှုတ်တော်မူ။
ဟုတ်ကဲ့, သင်လေဆာအသွားအလာကိုပစ်မှတ်ထားရမယ်! သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ website မှာတိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာရှင်တို့ကသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုရန်အသွားအလာ၏ညာဘက်မျိုးကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင့်ထံမှရွေးချယ်ဖို့အဘို့ကျနော်တို့ကျော် 1,000 အမျိုးအစားထဲမှာ domains များကုန်ဆုံးပြီ, ဒါနေပါစေသင်၌နေသောအရာကိုနယ်ပယ်စက်မှုလုပ်ငန်း, သင်သာအတွက်ဧည့်သည်များစိတ်ဝင်စားရဒါအကြှနျုပျတို့သညျကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့အသွားအလာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခနြိုငျ ထုတ်ကုန်။
မင်းရဲ့ TAT ကဘာလဲ?
အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန် 3-4 ရက်ပေါင်းကြာပါသည်။ ဒါကြောင့်ကြာကြာ4ရက်ပေါင်းထက်န့်နှင့်သငျသညျမဆိုအသစ်ကဧည့်သည်ကိုမြင်ရပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအီးမေးလ်ပို့, ကြှနျုပျတို့ချက်ချင်းကိစ္စကိုသို့ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်ပါ။
သင့်အားအများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအနည်းငယ်မျှခြေရာခံနိုင်သော link တစ်ခုပေးပါမည်။ Bitly ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်အများပြည်သူအတွက်ထူထောင်ထားခြင်းကြောင့်အရာအားလုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။
ကျနော်တို့ရောင်းအားအာမခံမပေးပါဘူး မည်သူမျှလုပ်နိုင်သည် - Facebook မဟုတ်၊ Google မဟုတ်၊ Linkedin မဟုတ်ပါ
သို့သျောလညျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များတစ်ဦးအဖြစ်တာအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ရောင်းအားတိုးမြင်ကြပြီ ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 800%နှင့်ဖောက်သည်တစ်ဦးအများစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကနေကိုအလွန်အမြတ်အစွန်းရကြပြီ။
သူကပြောပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအမိန့်အသွားအလာပမာဏအဖြစ်စွမ်းဆောင်ရည်, သင့်ဘ်ဆိုဒ်၏ဗေဒ, သင့်ဘ်ဆိုဒ်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုစသည်တို့ကိုထိခိုက်စေခြင်းအလိုငှါများစွာသောပြင်ပအကြောင်းအချက်များရှိပါသည်
Adsense နှင့် Affiliate ကို Safe?
100% ။ ကျနော်တို့ဒီလိုဖောက်သည်များ၏တန်ချိန်ဝန်ဆောင်မှုပေး။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအတွက်နီးပါးတိုင်းအဆင့် 1 နှင့်အဆင့်2နိုင်ငံများရှိသည်။
ငါ URL ကိုပြောင်းလဲပစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကာလအတွင်းကအခြားအပြောင်းအလဲများလုပ်နိုင်သလား?
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ပြီးပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ URL ကိုပြောင်းလဲပစ်သို့မဟုတ်အခြားအပြောင်းအလဲများလုပ်ခွင့်ပြုမထားပေ။ သငျသညျသစ်တစ်ခု URL ကိုများအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလိုအပ်သင့်ပါတယ်အသစ်တခုအမိန့်ပါစေ။
သငျသညျများကိုပေးစွမ်းအသွားအလာကိုမှန်ကန်ပါသလား? သို့မဟုတ်သင် SPAM သို့မဟုတ်အခြားမသမာနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. အသွားအလာ generate သလဲ?
ကျနော်တို့မကယ်မလွှတ်အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သတင်းအဖွဲ့အစည်းများမှအစုလိုက်အပြုံလိုက်အီးမေးလ်များသို့မဟုတ် post ကိုထွက်ပေးပို့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' က်ဘ်ဆိုက်များမှ traffic ကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအတုသို့မဟုတ်သိက္ခာမဲ့နည်းစနစ်ကိုမသုံးကြဘူး! စိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေကျနော်တို့ပေးပို့ရှိသမျှကိုအသွားအလာကိုမှန်ကန် 100% ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စစ်မှန်သောက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများထံမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ဝဘ်ဆိုက် URL၊ သော့ချက်စာလုံးနှစ်လုံးနှင့်သင်၏နယ်ပယ်။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပါ့မယ်
နိုင်ငံ, niche နှင့်သော့ချက်စာလုံးများအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ငါမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်မျိုးစုံ URLs များကိုရနိုင်မလား?
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကယ်မနှုတ်နိုင်အသွားအလာတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပါကကျနော်တို့၏ 4% စသည်တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဗြိတိန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, ပြင်သစ်, အီတလီ, စပိန်ထံမှအသွားအလာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးတစ်နေ့လျှင်သန်း 70 ကျော်ထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်မကယ်မလွှတ်။
ငါတဦးတည်းအထုပ်အဘို့အ URLs များကိုခွဲနိုင်ပါသလား?
မရှိပါ၊ ONE အထုပ်တစ်ခုတည်းအတွက်သာ URL တစ်ခု၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစတင်သောအခါသင် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။